SAWIRRO: Xog ku saabsan Sharciga Cusub ee Isgaarsiinta (Furaha 252, Amniga & Ganacsatada) | Baled Weyn Media Center
SAWIRRO: Xog ku saabsan Sharciga Cusub ee Isgaarsiinta (Furaha 252, Amniga & Ganacsatada)
Wuxuu ahaa sharcigii ugu mudada dheeraa inta la ogyahay shuruucda la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya, wax ka badan 10 sanno ayuu baarlamaanka horyaalay, shalay ayaana kama dambeys uu saxiixay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Munaasabaddii uu sharciga ku saxiixayay madaxweyne Farmaajo ayaa hadal uu ka jeediyay waxa uu ku qirey hawsha adag ee laga maray sharcigan isgaarsiinta, wuxuuna yiri “Wax sahlan ma ahayn, anaa idiin sheegaaya, dadka waxay arkaan in aan saxiixayno, laakiin waxaan soo galinay, shaqo aad iyo aad u faro badan”.
Waxaan halkaan lagu soo koobayaa nuxurka sharcigan uu xambaarsanyahay.
Ma ahan mid aad u faahfaahsan, hoosna uma sii galayo arrinta ku saabsan canshuuraha iyo qidmooyinka laga qaadayo shirkadaha isgaarsiinta. Jaangoynta canshuurta waxa uu sharciga u xilsaarayaa hay’adda isgaarsiinta qaranka oo la tashanaysa wasaaradda maaliyadda.
Isgaarsiinta waxa ay ka mid tahay meelaha canshuuraha ugu badan ay uga soo xaroon karaan dowladda, taas oo ka imanaysa taleefoonada malaayiinka ah ee maalin kasta la’isu, ruqsadaha shirkaddaha ay ku hawlagaan, lacagaha badan ee taleefoonada la’isugu diro iyo qidmadda hirarka iyo moowjadaha.
Sharciga waxa uu jiddaynayaa dhismaha hay’adda isgaasriinta qaranka oo ah mid madax banaan, yeelan doonta miisaaniyad u gaar ah, kana kooban haykal maamul oo kala sareeya, shaqaale u gaar ah, iyo waliba shaqooyin loo xilsaaray oo ay ka tahay dajinta miisaaniyadeeda, qorista shaqaalaha, bixinta ruqsadaha, iyo la socodka in uu sharcigan fulo.
Qodobada inta badan sharciga waxa ay quseeyaan hay’addan awoodda badan, waxaana qodobada sharciga ka mid ah qaab dhismeedka haykalka maamul oo uu ugu awood badanyahay guddiga maamulka oo ka koobnaan doona 9 xubnood.
Golahan waa kuwa leh go’aanka kama dambeysta ah ee hay’adda isgaarsiinta qaranka, haddii ay noqon lahayd inta ay la’egtahay canshuurta ay bixinayaan shirkadaha isgaarsiinta, waliba sida laga yeelayo hantida kale ee isgaarsiinta dowladda ee guurta ama ma guurtada ah sida furaha dalka ee 252 iyo barta internetka ee (.So).
Maadaamaa ay tahay mid ka mid ah hay’adda ugu waaweyn ee daqli soo xaraynta, sharciga waxa uu shaqaalaha hay’addan u ogolaanayaa gunno ka dheeraad ah mushaaraadkooda oo lagu jaangooyay hadba daqliga ay soo xareeyaan.
Sharciga waxa uu sheegayaa in uu illaalinayo xuquuqda shirkadaha, waxaa hay’adda isgaarsiinta uu farayaa sharcigan in ay illaaliso xogta ganacsi ee shirkadaha ay ka uruurisay.
Waxaase shirkadaha uu sharciga ku qasbayaa isku-xirka adeegga Isgaarsiinta telefoonnada oo loo arkay dan guud, lagama maarmaana tahay in la isu furo khadadka shirkadaha kale duwan ee ka ganacsada adeegga telefoonnada” si loogu sahlo bulshada in ay isticmaalaan hal laf (SIM Card), oo ay kula xiriiri karaan dhammaan shirkadaha kale ee ka hawl-gala dalka” sida ku xusan qodobka Qodobka 50aad.